Izingane zidlala ibhola ensimini okubulawelwa kuyo abantu | Scrolla Izindaba
Izingane zidlala ibhola ensimini okubulawelwa kuyo abantu
Kungumhlaba owuthuli lapho izingane ezincane ezithanda ukuchitha izinsuku zazo zijabulile zidlala ibhola.
Kepha le nkundla yebhola likanobhutshuzwayo isiyindawo lapho izigebengu ezihlasela khona abantu futhi zilahle izidumbu zabo ezihlahleni ezizungezile.
Isikhulu sezokuphepha komphakathi nelungu lekomidi lesigceme uJoel Mabaso utshele i-Scrolla.Africa ukuthi okungenani kutholakale izidumbu eziyisikhombisa phakathi kwezihlahla ezisemngceleni wenkundla ese-Braamfischerville, e-Soweto.
Uthe isidumbu sokugcina satholakala ngoNdasa. “Kutholwe intokazi iqotshiwe yalahlwa khona. Esinye isidumbu esasigcwele izinhlamvu satholwa silahlwe endaweni efanayo ekuqaleni konyaka,” esho.
“Isimo sihlukumeze izingane. Abazali besaba ukuthi izingane zabo zingaba izisulu ezilandelayo zalezi zigebengu ezinonya.”
UMabaso uthe eminyakeni ethile edlule wahlela abazali bendawo ukuthi bavule indawo evulekile, ukuze izingane zikwazi ukuyisebenzisela ukudlala ibhola. Kodwa umsebenzi waguqulwa ngokushesha yizigebengu.
“Amapali ajwayele ukwebiwa athengiswe njengezinsimbi ezilahliwe,” kusho uMabaso.
UMabaso nabadlali abasebancane baphoqeleka ukuthi bavalele amapali egcekeni elithile njalo ngemuva kokuthi bedlale ukuvimbela ukuthi engantshontshwa.
Unxusa uhulumeni ukuthi alekelele ekususeni utshani obukhule kakhulu nokufaka amalambu emigwaqo.
Ngasekuqaleni kwale nyanga, i-Scrolla.Africa ibike ngesoka eliyiqhawe elidutshulwe labulawa ngemuva kokuthi intombi yalo ibanjwe inkunzi ikhonjwe ngesibhamu. Lesi sigameko senzeke ezihlahleni ezifanayo lapho okudlala khona izingane zendawo.
Amaphoyisa athi adinga ukuba nezinombolo zecala ngalinye ukuthola umkhondo wamadokodo ukuze akwazi ukuphawula.